खेतीमा विषादी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? गर्भवती महिलालाई यस्तो असर गर्छ « Clickmandu
खेतीमा विषादी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? गर्भवती महिलालाई यस्तो असर गर्छ
प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार ११:१६
बर्दिया । विषादी प्रयोग गरेको तरकारी तथा फलफूल सेवनले सबैभन्दा बढी असर गर्भवती महिलालाई हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको विषादीको प्रयोगले गर्भवती महिला र नवजात शिशुमा नै क्यान्सर देखिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत परशुराम रावतले जानकारी गराएको छ ।
महिलालाई क्यान्सर हुने, गर्भपतन हुनसक्ने, बच्चा अपाङ्ग हुने, सुस्तः मनस्थिति बन्ने लगायतका खतरा विषादीको प्रयोगका कारण हुने गरेको विषादी बिक्रेता तथा सरोकारवालासँग विषादीको प्रयोग अवस्था र सोको नकारात्मक असरबाट बच्ने उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताए ।
८० प्रतिशत किसान केही समस्या हुने बित्तिकै एग्रोभेटमा जाने गरेकाले एग्रोभेट सञ्चालक दक्ष हुनुपर्ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत परशुराम रावतले बताए ।
नेपालमा प्रतिहेक्टर एकसय ४२ ग्राम रासायनिक विषादी प्रयोग भएको छ । जुन परिमाणको हिसाबले अन्य देशमा भन्दा निकै कम रहेको छ । भारतमा प्रतिहेक्टर तीनसय ८१ ग्राम, चीनमा दुई किलो २५ ग्राम, अमेरिकामा एक किलो नौ ग्राम, जापानमा १० किलो आठ ग्राम र सबैभन्दा धेरै दक्षिण कोरियामा १६ किलो पाँच सय ५५ ग्राम विषादी प्रयोग हुने गरेको छ ।
ती मुलुकमा विषादीलाई व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्दा किसानले राम्रो उत्पादन गर्न सफल भएका छन् भने उपभोक्ताले पनि स्वस्थकर तरकारी तथा फलफूल सेवन गर्न पाएका उनले बताए ।
रावतले भने- ‘तर हाम्रो देशमा विषलाई औषधिका रुपमा बुझ्दा किसानमा गम्भीर प्रकारका रोग लागेका छन्, उपभोक्ताहरुमा पनि दीर्घकालीन असर देखिएको छ ।’
नेपालमा अहिले ९५ प्रतिशत किसानले विषादी तरकारीमा प्रयोग गरेका छन् । नेपालमा २००५ सालदेखि मलेरिया नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विषादी भित्रिएको भएपनि विषादीको सदुपयोग गर्न नसक्दा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको उनले बताए ।
यस्तै, विषादीका कारण कतिपय पन्छी पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्लो समयमा अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको चिकित्सक बताउँछन् । बालबालिकामा रगतको क्यान्सर, छालाको क्यान्सर हुने गरेको भेटिएको छ । तत्काल उत्पादन बढाउनका लागि अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्दा नेपालमा थप समस्या देखिएको छ ।
‘किसानलाई छिटो नाफा कमाउनका लागि पनि अत्यधिक मात्रामा विषादी प्रयोग गरेका छन् त्यो असर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा परेको छ,’ रावतले भने ।
विषादी प्रयोग गर्दा प्रत्यक्ष असर किसानलाई पर्ने भए पनि अधिकांश किसान अनभिज्ञ रहेका छन् । नेपालमा विषादीको प्रयोगका लागि जनचेतनामा कमी रहँदा समस्या आएको हो ।
किनकि धेरै किसानलाई प्रयोग गर्दा हुने नोक्सान बारे ज्ञान नहुँदा क्यान्सरजस्ता खतरनाक रोगको सिकार बन्न पुगेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रावतले जानकारी गराए ।